Laser Cutting of Cordura Indwangu kanye Zokwenziwa Indwangu - Goldenlaser
Laser Cutting ka Cordura Indwangu
Izixazululo ze-Laser Cutting ze-Cordura Fabrics
Izindwangu zeCordura ziqoqo lezindwangu ezenzelwe i-fiber, ezenziwa ngenayiloni. Eyaziwa ngokumelana kwayo nemihuzuko, izinyembezi kanye nezikhafu, iCordura isebenza njengezinto ezinhle kakhulu zezicelo ezahlukahlukene zokugqoka, ezempi, zangaphandle nezasolwandle.
I-Laser cutter uvumela izindwangu zeCordura nezinye izinto zokwenziwa ukuba zisikwe ngokushesha nangokunembile .. Ukushisa okuvela emgqeni we-laser kuvala onqenqemeni futhi kuqede isidingo sokwelashwa okwengeziwe komphetho. Njengoba kungathintwa okwenziwayo lapho kucubungulwa izindwangu kusetshenziswa i-laser, leyo nto ingacutshungulwa nganoma iyiphi indlela futhi ngaphandle kokukhubazeka okwenziwe ngomshini, kungakhathalekile ukwakheka kwendwangu.
I-Goldenlaser inokuhlangenwe nakho okubanzi ekwenzeni imishini nobuchwepheshe obujulile ekusetshenzisweni kwe-laser kwimboni yendwangu. Sikulungele ukuhlinzeka ngezixazululo ze-laser eziqeqeshiwe ukufeza ukusika nokumaka yezindwangu zeCordura.
Izinqubo ze-Laser Ezisebenzayo Zezindwangu zeCordura:
1. Ukusika i-Laser kweCordura®
Lapho i-laser isika izindwangu zeCordura, ugongolo lwe-laser olunamandla amakhulu luvuthisa okokusebenza endleleni esikiwe, kushiye imiphetho engenalutho, ehlanzekile futhi evaliwe. Amaphethelo avaliwe we-laser avimbela indwangu ekubambeni.
2. Ukumakwa kwe-Laser kweCordura®
I-laser iyakwazi ukudala uphawu olubonakalayo ebusweni bezindwangu zeCordura ezingasetshenziswa ukufaka omaka bokuthunga ngesikhathi senqubo yokusika. Ukumakwa kwe-laser kwenombolo ye-serial, ngakolunye uhlangothi, kuqinisekisa ukulandeleka kwezingxenye zendwangu.
Izinzuzo zemishini ye-goldenlaser yokusika izindwangu zeCordura:
Ukuzivumelanisa nezimo okuphezulu. Iyakwazi ukusika noma yisiphi isayizi nokuma, kanye nokumaka ukuhlonza okuhlala njalo.
Ngokunemba High. Iyakwazi ukukhiqiza imininingwane emincane kakhulu futhi eyinkimbinkimbi.
Ukusika i-Laser kunikeza ukuphindeka okungcono kokukhiqizwa okukhulu.
Abasiki be-Laser badinga abasebenzi abancane futhi banciphise isikhathi sokuqeqesha.
Ukushisa okuvela kwinqubo ye-laser kuholela emaphethelweni ahlanzekile navalwe avimbela ukubola kwendwangu futhi kuthuthukise ukuheha okubonakalayo komkhiqizo ophelile.
Ukuhambisana okuhlukahlukene Ikhanda elifanayo le-laser lingasetshenziselwa izindwangu ezahlukahlukene - inayiloni, ukotini, i-polyester, ne-polyamide phakathi kokunye okungu-0 okunezinguquko ezincane nje kumapharamitha ayo.
Inqubo engeyona yokuxhumana. indwangu ayidingi ukuboshwa noma ukuvikeleka etafuleni lokusika.
Imininingwane ebalulekile yezindwangu zeCordura® nendlela yokusika i-laser
Indwangu yeCordura indwangu yokwenziwa (noma kwesinye isikhathi inhlanganisela yokwenziwa nokotini). Kuyindwangu ye-premium esetshenziswayo inwebeka ngaphezu kweminyaka engama-70. Ekuqaleni yadalwa yiDuPont, ukusetshenziswa kwayo kokuqala kwakungokwamasosha. Njengoba iCordura iyinto yokwenziwa, iqinile futhi ihlala isikhathi eside. Inemicu yamandla eqine kakhulu futhi izomelana nokugqokwa kwesikhathi eside. Iluhlaza kakhulu futhi ezimweni eziningi ixosha amanzi ngokweqile. Indwangu yeCordura ibuye ixoshe ilangabi. Impela, i-cordura iza ngezisindo nezitayela ezahlukahlukene ngokuya ngezicelo ezithile namaphrojekthi. Indwangu efana ne-Cordura esindayo inhle kakhulu ekusetshenzisweni kwezimboni. Ukuguquguquka kwendwangu yesitayela se-Cordura engasindi kusebenza kahle kuzo zonke izinhlobo zokusetshenziswa komuntu siqu nobuchwepheshe.
Ukusika i-Laser kuvame ukuvela kube inketho yokonga kakhulu. Ukusetshenziswa kwe- umsiki we-laserukusika izindwangu zeCordura nezinye izindwangu kungakhuphula ukusebenza kahle futhi kwehlise abasebenzi. Ukusika i-Laser nakho kuholela ekwenqabeni okuphansi, okufanele ngokuvamile kuthuthukise inzuzo yenkampani ekhiqiza izindwangu.
Njengengqalabutho yezixazululo ze-laser application emkhakheni wezindwangu, uGoldenlaser uneminyaka ecishe ibe ngu-20 enolwazi ekwakhiweni nasekuthuthukisweni imishini . I Imishini oluqanjwe Goldenlaser ziyakwazi ukukhiqiza izixazululo zenzelwa kanye eliphezulu imiphumela, ukusika futhi ukumakwa ezisezikhundleni eziphakeme kunazo zonke isivinini, ukunemba kanye quality kuyavumelana.
Indwangu yeCordura ayimelani nemihuzuko, izinyembezi, kanye nezikhafu - zonke izimfanelo ezilindelwe kwendwangu yokusebenza ephezulu. Indwangu yeCordura iyisithako esiyinhloko emikhiqizweni eminingi ehamba phambili yokusebenza kwamagiya nezembatho ezisukela ku:
Amajakhethi nezithuthuthu zezithuthuthu
Izinhlobo ezihlukile zeCordura®
- Indwangu yeCORDURA® Ballistic
- Indwangu yeCORDURA® AFT
- ICORDURA® Classic Indwangu
- Indwangu yeCORDURA® Combat Wool ™
- ICORDURA® Denim
- Indwangu yeCORDURA® Eco
- Indwangu ye-CORDURA® NYCO Knit
- Indwangu yeCORDURA® TRUELOCK
Ezinye izinhlobo zeCordura®
- Indwangu yePolyamide
Sincoma umshini we-CO2 laser wokusika izindwangu zeCordura®
I-JMC Series CO2 Flatbed Laser Cutting Machine
Kuqhutshwa igiya nokugiya
Indawo yokusebenzela enefomethi enkulu
Isakhiwo esifakwe ngokugcwele
Ijubane eliphezulu, ukucacisa okuphezulu, okuzenzakalelayo okukhulu
Ama-lasers e-CO2 ensimbi ye-RF asuka kuma-watts angama-300, ama-watts angama-600 kuya kuma-watts angama-800
Ufuna imininingwane eyengeziwe?
Ungathanda ukuthola izinketho eziningi nokutholakala kwezinhlelo ze-goldenlaser nezixazululo zezenzo zebhizinisi lakho? Sicela ugcwalise ifomu elingezansi. Ochwepheshe bethu bahlala bejabule ukusiza futhi bazobuyela kuwe ngokushesha.
Buza Isazi Manje!